I- Tenerife iyisiqhingi seIziqhingi iKhaneli. Ngendawo engaba ngu-2.034.38 km² kanye nesibalo sabantu abangu-894.636 yisona siqhingi esikhulu kunazo zonke iKhaneli archipelago kanye nabantu abaningi ISpeyini.
Inhloko-dolobha yesiqhingi kanye nayo yonke indawo yaseiKhaneli i-Santa Cruz de Tenerife. Idolobha laseSan Cristóbal de La Laguna liye libe yiGugu Lomhlaba kusukela ngo-1999.
I-Tenerife yi-volcano ye-Teide, ephakeme ngamamitha angu-3 718 eSpain kanye ne-volcano yesithathu enkulu kunayo yonke emhlabeni kusukela ekugcineni kwayo elwandle. I-Teide National Park nayo iyindawo eyiGugu Yezwe kusukela ngo-2007.